IFTIINKACUSUB.COM: Risiq aad calaf ku leedahay ,cidina kuuma diidi karto.
Risiq aad calaf ku leedahay ,cidina kuuma diidi karto.
Sadaqada iyo wax bixintu waa shay Ilahay agtiisa laga jecel yahay,bakhayl-nimada iyo gacan adayguna waa nusqaan iyo liidnimo mana aha wax fiican,in aad is-tustus iyo i arkay wax u bixiso , waxaa ka fiican in aad Ilahay dartii iyo ajar-doon aad u bixiso,taas ayaad ku liibanaysaa If iyo Aakhiraba.
Cid wax la siiyo lana kaalmeeyo waxaa ugu fiican, dadka foqorada ah ,gaar ahaan Agoonta aan Aabaha lahayn,kuwaasi oo markasta aanay bahidoodu aanay dhamaan ,wayo waxaa ka maqan oo Xabaal kaga jira ,lafdhabarkii reenka oo ah Abaha.
Nin ka mida dadka wanwanaagsan ee muxsiniinta ah,ayaa maalin maalmaha ka mida waxa uu Saylada xoolaha kasoo iibsaday neef xoolo ah,kaasi oo uu ugu talagalay in uu maalinta Ciida reerkiisa u qalo ,si ay ugu udxiyaystaan.
Neefkii markii uu soo iibiyay,ayaa waxa uu yeeshay waxoogaa shaqo ah,kadibna nin ay saaxibo yihiin ayaa inta uu neeftii Adhiga aha u dhiibay ku yidhi ,waxa aad gaysaa gurigaygii,kadibna ninkii waxa uu soo kaxeeyay neefkii adhiga ahaa , waxaanu geeyay gurigii ninka mid aan ahayn ,balse ah guriga aqal ahaan u xiga oo ay degan yihiin caruur Agoon ahi.
Wakhti yar ka bacdi ayaa ninkii neefka adhiga ah so iibsaday waxa uu yimi gurigiisii,kadibna waxa uu si dhakhsa ah markiiba u arki waayay neefkii adhiga ahaa ee uu soo iibiyay; waxa uu u yeedhay caruurtiisii isaga oo waydiinaya neefkii adhiga ahaa ee uu saxiibkii usoo dhiibay halka uu geeyay,in uu guriga keenay iyo in kale.
Caruurtii iyo Hoyadii gurigu waxa ay u sheegeen in aan wax adhi ah aan gurigan marnaba aan la keenin,balse waxa ay caruurtii ku dareen in neef adhi ah wakhtiyar ka hor la keenay gurigan ku xiga ee ay Agoontu ku jirto.
Odaygii reerki waa uu shakiyay,waxana maskaxdiisa ku soo dhacday,waar saxiibkaa neefkii adhiga ahaa ee ad usoo dhiibtay halkee ayuu la maray,shaydaanku xataa waxa uu ku yidhi malaha saxiibkaa neefkii hunguri ayaa ka galay .
Balse odaygii gurigu waxa uu tagay gurigii ay jaarka ahayeen ee caruurta agoonta ahi ay daganayd,si uu u hubiyo in neefkan ay caruurtiisu sheegaysaa uu yahay kiisii iyo in kale,markii uu albaabka garacay lagana furay, ayaa waxa uu markiiba isha ku dhuftay neefkii uu soo iibiyay oo reerkii u xaraysan.
Caruurtii agoonta ahayd iyo hoyadood ,madama ay si fiican u yaqanaan ninkan albaabka kusoo garacay ,waxa ay u qateen in maalintan Ciida ah uu u sido wax ay ku farxaan,balse waxa uu markiiba uu waydiiyay neefkan iyo cida u keentay.
Caruurtii iyo hoyadood waa ay is-eegeen kadibna hoyadii ayaa waxa ay tidhi,ma naqaano cidda waday waxa ay tahay,balse nin ayaa inta uu nagusoo garaacay nagu yidhi neefkan adhiga ah idinka ayaa lehe xaraysta,kadibna hoyadii waxa ay ninkii jaarka waydiisay waxa qaldan iyo neefkan adhiga ahi waxa uu yahay.
Odaygii jaarka ayaa waxa uu caruurtii agoonta ahayd iyo hoyadoodba u sheegay,qaabkii uu neefkani gurigooda ku yimi,kadibna waxa uu u balan qaaday in aan laga sarayn neefkan gurigan agoonta ,isaga oo ugu daray waxoogaa dhaqala ah oo ay raashin siistaan .
Hoyadii iyo caruurtii ay dhashay ee agoonta ahaa ,waxa ay noqdeen kuwo duco iyo Allah bari maalintaasi Ciida ah ku rayreeya,wadaadkii isaga ahaa ee neefka lahana waxa ay ugu duceeyeen ciibaado suuban iyo camal fiican If iyo Aakhiraba.
Sadaqada iyo wax isasiisku waa sharaf iyo karaamo uu leeyahay ninka iyo gabadha wanaagsani,waxaana fiican in aynu ku dadaalno ,madama walibaa maanta dadkeenu u badan yihiin kuwo aan waxba aanay gacanta ugu jirin.
Iska jir hadii tan oo kale ay kugu dhacdo in aad la bakhaysho ,raganimadu waxa ay ku jirtaa in aad Ilahay dartii uga tagto.
Way og-yihiin in aan been u sheegaayo!!
Tirada qoyskiinna xisaab ma kusoo saari kartaa?
Waxbarashadu waa furaha Nolosha, Aqoon la’aan waa ...
Dhabar xanuunka waxa keena iyo sida looga hortago ...
Midawgii iyo kala go'ii dawladaha Sweden , Norway ...
Ciidanka Dab-damiska Caasimada Oo Gurmad Balaadhan...
Nin ku dooday in Xabsiga mooyaane aanu meelkale ku...
Facbook ayaa ku sheegay qofka aad tahay .WQ/Khadar...
Ma og-tahay in ,goobta Dumarka timaha loogu hagaaj...
Nolosha dhamaanteed maaha mid dhibadan.
Sadaxdii madluum yaa u miciina ?
Tawxiidka Ilaahay ,yaan laysku-kiin dirin !
Maxaa Marxuumiinta dhintay loogu magac.daraa koob ...
Gurmad Qaran oo aan lahayn Qorshe dambe.
Su'aal aanad fahmin,ha ka jawaabin .
Macalin xumada maanta jirta .WQ/Khadar Aar.
Caruur mataano ah oo kala aabo noqday.
Taariikh kooban oo ka hadlaysa, Abwaan Nageeye Cal...
Nijaarkii Naxashka samayn jiray.
Dayaxaan madoobayn ,hadii aydaan dantayda yeelin.
Risiq aad calaf ku leedahay ,cidina kuuma diidi ka...
Daruur lagu amray in ay waraabiso nin saalix ah be...
Aboowe haygu odhan,adigaa Aboowe iyo wax ka xunba ...
Waa maxay sababta ay raga iyo dumarku u kala Lacag...
Ninkii i guursaday,wax walba oo noloshiisa ku saab...
Xisbiga Kulmiye kasoo bax ,Wadani ayaa ku daahirin...
Wiilka Siilaanyo sodoga u yahay ,Baashe Cawil ,nin...
Ninkii i guursaday, wax walba oo noloshiisa ah, wa...
Liyaa ,waa xaaskii nabi Ayuub
Quraanka iyo Sayniska (Damqashada Xanuunka)
LA YAAB: IPHONE 7 ayuu ku sigtey in uu Indhihiisa ...
Turjumaano ayay u baahan yihiin dadka somalida qaa...
Wanaagii xafladaasi ,hal Qof ayaa ku dhintay !
Afaraydii : Siyaasigu waa sixir qarsoon
QISO DHAB AH OO KA DHACDAY AMISTARDAM (HOLAND)
Gal-mudug maantaan la yaabay !
Abaari inama haysee , aqoon'darraa inna haysa!